Hive Platform ဖြင့်တန်ခိုးရှိစေရန် ( Henry Aung ) — HiveHustlers
#myanmar #hive #proofofbrain #creativecoin #archon #neoxian #aeneas #hivelist #hivehustlers
Then …. You got the power to create money… !PIZZA !LOLZ. !LUV
ကိုဟင်တို့ မိတ်ဆက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့လို့ အခုလို Social Media Blockchain ပေါ်မှာ အိမ်မက်ကြီးကြီးမက်ခွင့်ရလာတာပါ။ !LOLZ
အိမ်မက်တော့ ရှိထားပြီ။ အကောင်ထည်ဖေါ်ဖို့ပဲ လိုတော့တယ်။ !PIZZA. !LOLZ. !LUV
@nyimwa, I sent you an $LOLZ on behalf of @kachinhenry
@kachinhenry(1/1) gave you LUV | wallet | market | connect | <><
မှန်လိုက်လေ ကိုဟင်ရေ တကယ်ကို နောင်အနာဂါတ်မှာ တန်ခိုးထွားလာတော့မှာဗျ။ Hive ပလက်ဖောင်းကြီး အောင်မြင်ပါစေ။ !PIZZA
ကိုရွှေဘိုလည်း အောင်မြင်ပါစေ... !PIZZA. !LOLZ. !LUV
@nyinyiwin, I sent you an $LOLZ on behalf of @kachinhenry
ဟုတ်တယ် 1$ နဲ့ လောလောဆယ်အထိတော့ ထိန်းထားတာပဲ။Hive platform များများ အောင်မြင်ပါစေလို့....!PIZZA
ခုတော့ မထိန်းနိုင်တော့ဘူး... ပြန်ကျသွားပြီ။. !LOLZ. !PIZZA. !LUV
တန်ခိုးရှိအောင် ကြိုးစားနေတယ် အကို
စာပြန်ရေးတာ သုံးလကျော်လောက်ကို hp 400 ကျော်လောက်ပြန်စုမိပြီ အကို
HDB ကတော့ ဂိမ်းထဲပြန်ထည့်တာနဲ့ token စုတာနဲ့ မကျန်တော့ဘူး
တချိန်ကျရင် တကယ်တန်ခိုးရှိလာပါလိမ့်မယ်။. !PIZZA. !LOLZ. !LUV
ကျွန်တော်လည်း အပေါ်က လူပျိုကြီး ကိုဒွန့် မန့်သလိုပါပဲ 😁
တန်ခိုးရှင်တွေ... Hive ဈေးတက်အောင် မစတော်မူပါ။ ဝစကီလည်း ဆက်ပါ့မယ် ဖွာတော်လည်း ဆက်ပါ့မယ်။😀😀😀. !LOLZ. !PIZZA. !LUV
@kachinhenry(5/20) tipped @htwegyi (x1)